Ndiyizisela twist entsha umdlalo yakho rhoqo Blackjack yi Hi Lo Blackjack. Le add-on osemqoka ikuvumela ukuba babheje ixabiso ikhadi lesibini ukuba iqwalaselwe ngu kumthengisi. Ukuze mhlawumbi bet ukuba abe nexabiso ephakamileyo okanye ixabiso esezantsi ikhadi kuqala. Nangona oku kuchaphazela umdlalo Eyona, yongeza kwi lokuwina yakho kwaye impembelelo ebalulekileyo Rtp umdlalo njengoko kwakunye.
Malunga umphuhlisi Hi Lo Blackjack
Owaqalwa ngu iyisardoniksi-koKwenene, Hi Lo Blackjack usisiphumo yentsebenziswano iinkampani ezimbini umdlalo okhulayo. Lo duo beza kunye ngoFebruwari 2015 kwaye sele nokutyhafa okona yekhasino mobile imidlalo ukususela ngoko.
Hi Lo Blackjack na umdlalo yakho eqhelekileyo Blackjack nge twist zikude. Akukho nto inzima ngale add-on. The Hi Yabona bet osemqoka wongeza nje kumnandi ukuya kumdlalo. Kunye eqhelekileyo emithathu ezintandathu amakhadi kunye ozithembileyo, umdlalo uyaqhubeka njengoko ngenindazile. Khetha iitshiphusi kuxhomekeka kwixabiso bet ukuba ufuna ukwenza, kananjalo ozithembileyo ufuna ukudlala. eyayise-, Ukubetha YOKUMELANA iqhosha ukuqalisa umdlalo.
Hi Yabona yenye ozithembileyo udlala ngexesha Blackjack. Apha, umdlali ufumana ithuba babheje ixabiso ikhadi lesibini eziya utsalwe umthengisi emva amakhadi zokuqala zifakwe phezu kwetafile. ngoku, umdlali nokuba kufuneka ukhethe aphezulu okanye asezantsi, yiyo i, kufuneka achaze ukuba ikhadi yesibini iya kuba okanye ixabiso elingaphantsi ngaphezu ikhadi kuqala. Ukuba uyabazi ngokuchanekileyo, ngoko uhlawulwa kuba ngokukhawuleza. Enye meko eliwinileyo xa zizonke 21 kuyafikelelwa ekwikhadi yesibini ngokwalo. A Push kwenzeka ukuba ikhadi sokuqala Ace, kwaye nowesibini kubonakala ukuba abe Ace. Umdlali uya kulahlekelwa ubhejo ukuba ikhadi lesibini kukho Ace lo gama enye kuqala,, okanye ukuba uqikelelo ayichanekanga.
Xa ubhejo Hi Yabona ophezu, umdlalo rhoqo Blackjack uyaqhubeka. Ukufumana zizonke 21 okanye kufutshane kuyo le njongo somdlalo.
Kunye Rtp of 99.92%, Hi Nanko Blackjack yi uhlobo okumangalisayo Blackjack rhoqo. Ukuba ufuna ukuzonwabisa eyongezelelweyo umdlalo yakho Casino endiwuthandayo, ngoko lo mdlalo ilungelo ukutyala.